WARBIXIN XASAASI AH: Soomaaliya waxay dhexda u taagan tahay Dagaal Xawilaadeed ka yimi wadamada Khaliijka. – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Asbuucyo kahor ayay ahayd markii gobalka Geeska Africa u dhaqaaqay dhinaca nabadda, waxay ahayd wax aan lafileynin heshiiskii Itoobiya, Eritrea, Somalia iyo Jabuuti, waxayna ahayd talaabo aad ay ugu riyaaqeen caalamka badankiisa, gaar ahaana golaha Ammaanka ee Qaramada Midowbay.
Laakiin Soomaaliya faa’iido badan uma yeelan isbedelada gobalka Geeska Africa, sababtuna waa dagaal wakaaladeed culus oo gudaha Soomaaliya hadda ka socda, una dhaxeeya dawladda Faderaalka oo dhinac iyo dawlad gobaleedyada oo saameyn badan ku leh arrimaha Siyaasadda ee dalka.
Eleanor Beevor oo ah qoraa arrimaha barriga dhexe aad uga faaloota ayaa maqaal ay qortay waxay ciwaan uga dhigtay “Soomaaliya waxay dhexda u taagan dagaal wakaaladeed ka socda wadamada Carbeed’’, waxaana qoraagu aad ugu dheeraday arrimaha Ammaanka iyo saameynta wadamada Carbeed.
“Shaki ma saarna in bilo ka hor gobalada oo dhan looga taageerayey dawladda Faderaalka ee saldhigeedu yahay Muqdisho, ma fududeyn in la helo taageerada siyaasiinta gobalada iyo shacabka, laakiin hadda xaajadu wey sii durugtay, mar kalena kala irdhowga siyaasadeed ayaa soo muuqday” ayaa lagu yiri maqaalkan.
Qoruhu waxay sheegaysaa in wadamada Qadar & Imaaraatka Carabta oo ah carab ehelo ah ay isku hayaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya, waxayna la kala safan yihiin dawladda dhexe iyo maamul gobaleedyada oo aan saameyn yar laheyn.
Warbixintan waxaa lagu sheegay in uusan wanaagsaneyn mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaana gobalka Geeska Africa, waxaana la rumeysan yahay in ay ku dhex-milantay xiisaddaha dalalka Khaliijka Carbeed.
Qadar waxay garab siisaa dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxayna ujeedada ugu weyn tahay in ay hesho saxiixyada heshiisyada caalamiga ah, laakiin wey ku qasban tahay in ay ku koobnaato Muqdisho oo kaliya, maadaama aysan dawladda dhexe waxba ka sameyn Karin meel ka baxsan.
Imaaraatka Carabtu waa qeyb kale oo saameyn weyn ku leh go`aamada madaxda dawlad gobaleedyada dalka, waxayna inta badan la safan tahay kooxahaas oo ay ka dhex aragto in ay yihiin kuwa kaliya ee mar kasta saameynta ku leh arrimaha siyaasadda ee dawladda Faderaalka.
Ammaanka ayaa lagu sheegay warbixinta in uu ka jiro fashil weyn, waxana lasoo xigtay Khuburo dhanka ammaanka ah oo iskugu jira Ajnabi iyo Soomaaliya, dagaalka Al- Shabaab ayaa la sheegay in uu wiiqmay oo aan horeyba loo qaadin.
Madaxweyne Farmaajo ayaa warbixinta lagu xusay in uu ku guuldareystay qorshihiisa 2 sanno in lagu soo afjaro Al- Shabaab, taas bedelkeedana waxaaba la cadeeyey in ay Argagixisadu hadda helayaan gabaad wanaagsan iyo ifafaalo ay dib iskugu soo aruursanayaan.
La wareegida Amniga ee ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ayaa la sheegay in uusan aheyn mid u socdo sidii lagu heshiiyey, waxaana cabsiba laga qabaa in haddii AMISOM ay meel ka baxdo ay si fudud kula wareegayaan Al- Shabaab, maadaama ciidamada Soomaalidu aysan iska caabin Karin kooxahaas.
Doorashooyinka ayaa la galiyey hubanti la`aan baahsan, waxaana warbixinta lagu xusay in Madaxweyne Farmaajo uu balan qaaday doorasho hal qof iyo hal cod ah, taas oo aan suuragal aheyn baa la yiri waqtigan, haddii ay Madaxda dawladdu ku guuldareystaan meelmarinta qorshaha doorashadana waxaa lagu sheegay fashil weyn oo siyaasadeed.
2 sanno oo hadda mudada xil-heynta uga hartay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in aan la hubi Karin xaaladdu say noqon doonto, waxaana cabsi laga qabaa in fashil kale ay tasi noqoto.
Warbixinta waxaa lagu xusay in Hay’addii Sirdoonka & Nabadsugida Qaranka Soomaaliya gacanta u gashay mid kamid ah saaxiibada dawladda Qadar ee Soomaaliya, gaar ahaana wakiilkii AlJazeera ee dalkaas Fahad Yaasiin Haaji Daahir oo horey u soo noqday Agaasimaha Madaxtooyada.
Puntland & Somaliland ayaa la sheegay in ay ku loolamayaan gacan ku heynta gobalada Sool iyo Sanaag, waxaana lagu sifeeyey dagaalkooda ka sokow in ay labaduba xariir wanaagsan la leeyihiin dawladda Imaaraatka Carabta oo ay heshiis kula galeen dekedaha Berbera & Boosaaso.
Eleanor Beevor oo ah qoraa arrimaha barriga dhexe aad uga faaloota ayaa maqaal ay qortay waxaa lagu gaba-gabeeyey haddii Xukuumada Qadar ay gacanta ku dhigtay Xukuumadda Muqdisho, Imaaraatka Carabtuna waxay hadda adeegsanayaan dawlad gobaleedyada iyo meelo kale oo muhiimad ay u arkayaan, kulana dagaalamayaan dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Shaki ma saarna in ay tanni fursad wanaagsan u abuurayso joogitaanka ciidamada Midowga Africa ee AMISOM, sidaas oo kalena mustaqbalka dalka ayay dib u ridaysaa waxaana ku adkaan doonta madaxda Soomaalida in ay si wanaagsan lugaha ugala baxaan arrimaha wadamada khaliijka ee ay dhexda u taagan yihiin.
manta somaalia waxaa hogaankeeda haya dowlad loogu magac daray QANDHUR QARAN. nin iyo seedigiis ayaa iska maamulanaya masiirka iyo aayaha umada somaaliyeed. bal maxaa somaali dhexdhigay gabdho carbeed oo is xagxaganaya.